”Odaygu noloshiisa ha eego” – Wanda Nara oo Maradona uga jawaabtey eraygii ahaa Icardi agtayda waa ka dhintay! – Gool FM
”Odaygu noloshiisa ha eego” – Wanda Nara oo Maradona uga jawaabtey eraygii ahaa Icardi agtayda waa ka dhintay!
(Milano) 19 Juunyo 2016 – Wanda Nara, xaaska Mauro Icardi, ayaa qaniinyo kale iskaga fujisay Diego Maradona iyadoo leh. “Waa inuu noloshiisa eegaa intii aanu teenna ka hadal.”
Halyeeygii reer Argentine lee Maradona ayaa dorraad Radio Metro ku yiri “Icardi dhankeeyga kama jiro. Kaddib wixii dhacay anigu waxaan taageersanahay Maxi Lopez. Dadka aan lahayn dabar akhlaaqeed aniga waa iga dhinteen.”
Wanda ayaa waxaa horay u qabi jirey Maxi Lopez, oo ay saaxiibo isku dhinta ahaayeen Icardi oo ay Sampdoria isla joogeen, iyagoo xitaa tamashle isla aadey.
Yeelkeede, waxaa xigtey inay Maxi uga weecato Icardi oo daba maryeeyn sameeyay, waxaa deeto xigey qalalaase qoys, qaraar iyo dagaal qareennadu u kala dab qaadayeen oo dhanka sharciga ahaa, dagaalladaasoo marmar garoomada soo gaarayey.
“Warka Maradona waxaan u qaadanayaa sida uu yahay,” ayay ku af celisey Wanda oo la hadlaysay Radio Mitre.
“Haddii laacibiinta loo qabto waxa ay ka sameeyaan noloshooda khaaska ah, deeto laacib harayaaba ma jiree, noloshiisa ha eego intii uusan annaga naga hadlin.” ayay raacisay Wanda oo xaqiijisey inuu ninkeedi buug soo saari doono bisha Sebtember.
PSG oo mushaar qaali ah ku soo jiidanaysa Neymar si uu uga soo tago Barcelona